Qurbajoogta Puntland oo Garoowe shir ku yeeshay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandQurbajoogta Puntland oo Garoowe shir ku yeeshay
July 30, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Qurbajoogta shirka ka qaybgashay. Sawirka: Xafiiska warbaahinta madaxtooyada Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Shir qurbajoogta Puntland ay lahaayeen ayaa xalay ka dhacay huteelka Jubba ee caasimada Puntland, Garoowe.
Shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo ku-xiigeenkiisa Cabdixakiim Cumar Camay.
Waxaa kale oo shirka ka qaybgalay qurbojoog badan oo dibada ka timid.
Mid kamid ah qurbajiigta shirk aka qaybgalay oo la hadlay warsidaha Puntland Mirror ayaa sheegay in ujeedka shirka uu ahaa sidii qurbajoogta ay dalka maalgelin uga samaysan lahaayeen si ay uga faa’iideeyaan dalka dhaqaalahooda iyo cilmigooda.
Madaxweynaha, Madaxweyne ku xigeenka iyo marwada Madaxweynaha. Sawirka: Xafiiska warbaahinta madaxtooyada.
Madaxweynaha dowlada Puntland oo shirka ka hadlay ayaa qurbajoogta ku amaanay kaalinta horumarineed ee ay dalka ka geystaan wuxuuna ku dhiiri-geliyay in ay sii labo jibaaraan dadaalkooda ku aadan horumarinta dalkooda.
Qurbajoogta Puntland ayaa door weyn kaga jira horumarinta iyo koboca dhaqaalaha Puntland.
July 21, 2016 Ciidamo huwan ah oo weerar ku qaaday saldhigyada al-Shabaab ee duleedka Kismaayo